एउटै विभाग दुई टुक्रा भएपछि आइओएम–जिप्यान द्वन्द्व : एक पछि नहट्ने अर्को तालाबन्दीमा उत्रिने – Health Post Nepal
२०७८ पुष २९ गते १५:३०
काठमाडौं – चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गत पुस २२ गते जनरल प्राक्टिस तथा इमरजेन्सी मेडिसिन विभागलाई (एमडिजिपिएम) दुई टुक्रा पार्ने निर्णय गर्यो। विभाग तथा स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै संस्थानले इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग र जनरल प्राक्टिस विभाग गरी दुई अलग–अलग विभाग बनायो। तर, यो निर्णय अहिले विवादमा परेको छ।
जनरल प्राक्टिसनर्स एसोसियसन अफ नेपाल (जिप्यान) ले केही दिनअघि विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यसमा आपत्ति जनायो। उसले विभागलाई दुई भिन्नभिन्नै खण्डमा विभाजन गर्नु न्यायोचित नभएको र यसले समग्र देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो असर पुर्याउने बतायो। उसले यो निर्णय अविलम्ब सच्याउनसमेत माग गरेको छ।
निर्णय नसच्चिए तालाबन्दीमा जान्छौं
जिप्यानका सहसचिव डा. विश्वराज दवाडीले हेल्थपोष्टसँगको कुराकानीमा आइओएमले निर्णय नसच्याए तालाबन्दीमा उत्रिने बताए। ’अहिले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह मात्र गरेका छौं फिर्ता नभए चाँडै तालाबन्दीमा उत्रिन्छौं।’, उनले भने।
आइओएमको यस्तो निर्णयले हाल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र करार तथा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको भविष्य नै अन्योलमा परेको उनले बताए। ’आइओएमको यस्तो अपरिपक्व निर्यणले अध्ययनरत विद्यार्थी र कार्यरत चिकित्सकको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। सम्बन्धित विशेषज्ञहरुसँग छलफल नै नजरी गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता होस्।’, उनले भने।
उनले निहित स्वार्थका पछि लागेर केही व्यक्तिले निर्णय गरेको आरोप पनि लगाए। ‘डा. प्रदिप वैद्द यसमा सुरुदेखि लाग्नु भएको थियो। उहाँ के इन्ट्रेस्टले लाग्नु भो थाहा छैन। उहाँको आफ्नो विषयगत भन्दा पनि अरु क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ।’
डा. दवाडीले अहिले नै विभाग छुट्याउन आवश्यक नै नभएको भन्दै दुईजनाको लहडमा विभाग छुट्याइएको आरोप लगाएो लहडमा विभाग छुट्याइएको आरोप लगाए। ‘नेपालमा अझै थुप्रै विशेषज्ञ पुर्याउन सहज छैन। दुईजनाका स्वार्थमा विभाग टुक्र्याइएको छ। नेपालका ५४ जिल्लामा यो विषय पढेका चिकित्सकहरुले सेवा गरिरहनु भएको छ। काठमाडौैंमा मात्र त नेपाली बस्दैनन्, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोटजस्ता दुर्गममा पनि नेपाली बसेका छन्। काठमाडौं बसेर प्रधानमन्त्रीको किड्नी जाँचेर मात्र त हुँदैन होला नि’, उनले भने।
‘विभाग छुट्याउनै पर्ने भए जनरल प्राक्टिस सोसाइटी थियो, ८० को दशकदेखि पढेका सिनियर प्रोफेसर थिए, सम्बन्धित विषयगत मानिसहरु थिए। उनीहरुसँग सल्लाह त गर्नुपथ्र्यो नि, सल्लाह नै नगरी स्वार्थप्रेरित रुपमा विभाग टुक्र्याइएको छ’, उनले आरोप लगाउँदै अगाडि भने।
जसले जे भन्यो तेही गरिदिन म कुर्सीमा बसेको होइन : डीन
यता, संस्थानकी डीन डा. दिव्यासिंह शाहले टुक्रयाएको भन्दा पनि इमरजेन्सी विभाग खडा गरेको बताइन्। उनले इमरजेन्सी विभागलाई अझ प्रभावकारी र उचाइमा पुर्याउन अलग इमरजेन्सी विभाग खडा गरिएको बताइन्।
‘जनरल प्राक्टिस अर्कै विधा हो। सबै चिज जान्ने तर, एक्सपर्ट होइन। साधारण केस जनरलले हेरे पनि जटिल केस हेर्न इमरजेन्सी स्पेसलिस्ट चाहिन्छ। त्यसैले यसलाई अझ उचाइ र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।’, उनले भनिन्।
डा. शाहले दुई वर्षअघि नै आफू डीन नभइसक्दै यो निर्णय भएको बताइन्। ‘सबै हेडअफ डिपार्टमेन्ट डाक्टरहरु बसेर छलफल गरेर आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि म डीन नहुँदै बनाइएको कमिटीले गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आएको हो। बीचमा कोरोना महामारीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।’, उनले भनिन्।
विशेषज्ञहरुसँग छलफल नै नगरेको भन्ने डा. दवाडीको आरोप खण्डन गर्दै उनले भनिन्, ‘मैले मात्र गरेको होइन, हामीले सबै विशेषज्ञसँग छलफल गरेका छौं। साइन गरेको माइन्युट नै छ हामीसँग। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थलागि यो निर्णय भएको होइन। बिरामी र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सेवा र शिक्षा दिनका लागि नै हामी यहाँ बसेका हौं।’, उनले भनिन्।
‘उहाँहरुको (जिप्यान) कुरा होइन। आइओएमले गरेको निर्णय हो। उहाँहरुको सेवासुविधा केही कटौती गरेका छैनौं। नयाँनयाँ विभाग त बनिहाल्छ नि। हामी अर्को त बनाउन पाउँछौं र सक्छौ नि। म्यानपावर र रिसोर्स बढ्दै जाँदा विभाग थप्छौैं। कस्तो विभाग चाहिने हो के थप्ने हो, यो अधिकार त अध्ययन संस्थानको हो इन्डिभिजुअल हैन।’, डा.शाहले भनिन्।
उनले एउटा सानो समूहको लागि वृहत्तर मानिसहरुको राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हनन् गर्न नमिल्ने बताइन्।
संस्थानको यो निर्णयले विद्यार्थीहरुमा केही असर नगर्ने पनि उनले बताइन््। ‘यो निर्णयले विद्यार्थीलाई केही असर पर्दैन। २४ जना अध्ययन गरिरहेका छन् उनीहरु विभिन्न क्षेत्र र विभागमा जान्छन्। विद्यार्थीलाई सबै सिकाइन्छ, केही असर पर्दैन।’, उनले भनिन्।
तालाबन्दीमा नै उत्रिने जिप्यानले चेतावनी दिएको छ नि, के निर्णय फिर्ता हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मेरो लागि गरेको निर्णय होइन। नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। फिर्ता त कसरी गर्ने फिर्ता। फिर्ता गर्न नै मिल्दैन नि।’, उनले भनिन्।
डा. शाहले सहीकाम गर्न नसके आफू कुर्सीमा बस्नुको कुनै अर्थ नै नरहने बताइन्। ‘सहीकाम गर्न सकिनँ भने त म कुर्सीमा बस्न भएन नि। म इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनलाई एउटा राम्रो मार्गदर्शन गरौंला, राम्रो गन्तव्यमा लगौंला भनेर कुर्सीमा बसेको। जसले जे भन्यो तेही गरिदिन त म यहाँ आएको होइन्। त्यसो गर्दिने भए त म यहाँ आएको औचित्य नै भएन नि। तालाबन्दी गरेनि फिर्ता गर्न मिल्दैन।’, उनले भनिन्।
One thought on “एउटै विभाग दुई टुक्रा भएपछि आइओएम–जिप्यान द्वन्द्व : एक पछि नहट्ने अर्को तालाबन्दीमा उत्रिने”
Dr Ym shakya says:
General practice and emergency medicine (GP&em)department, iom TUTH MMC established1982. .till now 450+ graduated taking care 77 districts of Nepal.and most of all hospital emergency handle ,even norvic, grandy, medicity by gp&em. Me Prof Dr yogendra shakya head (22 yrs experiencs) . Very sad to see our iom best wisher want to separate gp and em, will be disaster for in all 77 districts, who will take care emergency services. Till now in Nepal7DM in Emergency Medicine all our graduated,I feel so sad to see consequences but it will be suicidal decision for all 77 districts our gp and em providing great care ,emergency obstetric cesarean section, appendectomy, sub total hysterectomy, even in covid outbreak, earthquake 80% discharge from emergency, 15-20% admissions.
Our best wishes to government for should not separate department. Conclusions: we can made two unit, under gp& emergency medicine dept.
Uint 1: chief emergency services…….
Unit II: General practice services….
Will be best outcome .
Best wishes for great service 👏